Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2014 March 22
22 Marsa 2014
Marsa 2020 35 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 22 Marsa 2014
Vehivavy Enina Notazonina Ho Andevo Tao Libanona Atsimo
Mpanoratra Joey Ayoub · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Navoakan'ilay tranonkala avy any Cote d'Ivoire antsoina hoe Koaci.com ny fisian'ny vehivavy enina notazonina ho toy ny andevo tao an-tanànan'i Nabatieh ao atsimon'i Libanona. Niantso hijerena ny zava-manjò ireo vehivavy ireo ny blaogera Libaney Joey Ayoub
Firaisankina Manerantany Ho an'ireo Nanjavona Tamin'ny Voromby Malayziana MH370
Mampiseho ny firaisankinany amin'ireo havana sy ny naman'ny mpandeha nanjavona tao amin'ny voromby tsy hita an'ny Malaysia Airlines zotra MH370 izay tsy hita nanomboka ny 8 marsa ny mpiserasera manerana izao tontolo izao
GV Face: Ahoana Ny Hahazoana Vatsy Rising Voices
Mpanoratra Sahar Habib Ghazi · Amerika Latina
Manan-kevitra hanampiana ny vondrom-piarahamoninao hilazalazany ny tantarany amin'ny fampiasana median'olom-pirenena ve ianao? ikaroka ny fomba tsara indrindra hahazoana fandresena ny ekipan'ny Rising Voices (RV)
Voaràran'ny Lalàna Ao Oganda Ny Fiarahan'olon-droa Mitovy Fananahana
Mpanoratra James Propa · Afrika Mainty
Tsy azoko ny antony hanohanana ny lalàna #antigaybill ao Oganda! Tsy tokony hanery ny hafa hanaraka na hanaiky ny hevitrao momba ny fananahana ianao. Tsy nisy olona nilaza anao ho pelaka!
GV Face: Arahabaina 25 Taona ny Web!
Mpanoratra Ellery Roberts Biddle · Fahalalahàna miteny
Inona no maha-samihafa ny aterineto sy ny habaka? Nahoana no zava-dehibe kokoa ny habaka malalaka? Miresaka momba izany ao amin'ny GV Face ireo matihanina sy mpandala ny zon'olomnbelona